Ukuphakamisa izithintelo kuhambo lwamazwe aphesheya ukuya e-USA kuyabongozwa
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Ukuphakamisa izithintelo kuhambo lwamazwe aphesheya ukuya e-USA kuyabongozwa
Airlines • isikhululo • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Julayi 7, 2021
Amaqela oshishino abongoza ukususwa kwezithintelo kuhambo lwamazwe aphesheya oluya eUnited States
Kwiveki nganye ukuba izithintelo zokuhamba zihlala zikhona, uqoqosho lwase-US luphulukana ne-1.5 yezigidigidi zeerandi kwinkcitho evela nje eCanada, kwi-European Union nase-UK-imali eyoneleyo yokuxhasa imisebenzi eyi-10,000 XNUMX yaseMelika.
Izithintelo zokungena kwiindawo ezinomngcipheko kuphela.
Guqula yonke eminye imiqobo yokuhamba yokuhamba ngengubo yenkqubo yokungena ngokusekwe kwilizwe ngalinye kunye novavanyo lomngcipheko womhambi ngamnye.
Qinisekisa ukuba isakhelo kulula ukusiqonda, ukunxibelelana, nokumilisela.
Umdibaniselwano wemibutho yezorhwebo engama-24 emele indawo enkulu neyahlukeneyo yoqoqosho lwaseMelika ivuselela iifowuni ezingxamisekileyo zokuphakamisa izithintelo kutyelelo lwamazwe aphesheya eunited States, kwaye ngolwe-Lwesithathu ukhuphe umgaqo-nkqubo wokuvula imida ngokukhuselekileyo.
Ebizwa ngokuba "yiNkqubo-sikhokelo yokuKhusela ngokuKhuselekileyo imiThetho yokuNgena kunye nokuQala ngokutsha uKhenketho lwaMazwe ngaMazwe," uxwebhu luchaza imigaqo-nkqubo yokwamkelwa ekugqibeleni kweendwendwe zamazwe aphesheya zibuyele eMelika ngelixa kugcinwa ezempilo nezokhuseleko njengeyona nto iphambili.
Umzi mveliso wezokhenketho uyavuma ukuba ukukhokelwa yinzululwazi yeyona ndlela ichanekileyo, kwaye isayensi sele isixelela kangangexesha elithile ukuba kunokwenzeka ukuqala ukuvula kwakhona ngokukhuselekileyo uhambo lwamazwe aphesheya, utshilo. Umbutho Wokuhamba wase-US UMongameli kunye ne-CEO uRoger Dow. Uxwebhu lwethu luyaqhubeka nokubeka phambili ukhuseleko ngelixa lubonelela ngemephu yendlela yokusombulula iibhiliyoni zeedola kumonakalo wezoqoqosho obangelwe kukuthintelwa okuqhubekayo kokuwela imida yethu, ngakumbi ukusuka kumazwe amanyeneyo anezinga elifanayo lokugonya. Sinalo ulwazi kunye nezixhobo esizidingayo ukuqala uhambo lwethu kumazwe ngamazwe ngokukhuselekileyo, kwaye lixesha elidlulileyo lokuba sizisebenzise. ”
"Iinqwelo-moya zase-US ziye-kwaye ziyaqhubeka ukuba-ngabameli abomeleleyo bendlela esekwe emngciphekweni, eqhutywa ngedatha yokuqalisa ngokukhuselekileyo uhambo lwamazwe aphesheya njengoko kubekiwe kwiplani," yatsho i-Airlines ye-Mongameli waseMelika kunye ne-CEO uNicholas E. Calio. “Sincike kwisayensi kuyo yonke le ngxaki, kwaye uphando luye lwafumanisa ukuba umngcipheko wokudluliselwa kwenqwelomoya usezantsi kakhulu. Ngapha koko, iHarvard Aviation Public Health Initiative igqibe kwelokuba ukuba senqwelweni kukhuselekile ukuba akukhuselekanga kunezinto eziqhelekileyo njengokutya kwindawo yokutyela okanye kwivenkile yokutya. Inzululwazi icacile-lixesha, ukuba aliloxesha elidlulileyo, lokuba urhulumente wase-US athathe amanyathelo kwaye avule uhambo phakathi kwamazwe ase-US namazwe anobungozi. ”
UMkomishinala oPhezulu waseCanada eJamaica utyelelo kunye ...
Ukhathalelo lweMpilo olungenamda kunye noMphathi uBobby Chinn Phuma ...
Abakhokeli babakhenkethi basePraslin babelana ngezixhalaba ezitsha noKhenketho ...
IBahamas Yakha kumaThuba aPhakathi ngokuBanzi e ...
IFlorida iyeyosulelekileyo, iHawaii yeyona US ibulala abantu ...
Uhambo lweekhilomitha ezingama-3200 luphinda luthathe kwakhona uKhenketho oluCothayo
IYurophu isusa izithintelo zokuhamba kwamanye amazwe ...
Ukupasa kwe-COVID kubakhenkethi abanga-EU abaziswe eFrance
Umtsalane omtsha kwisikhululo senqwelomoya iFrankfurt:
Iziganeko ezithathu zase-Itali zeBolster yezoKhenketho ngeNtsha ...
Ukhenketho lukhange lukhange umphezulu wokuBakho
Uncedo olufunwayo kwii-Airlines eziManyeneyo: Ugonyo kuphela!
IGuam ibonelela ngeNkonzo yasimahla yaseGuhan eTrolon eTumon